When Should You Take the DAT? [Important Info]
Ka dib markii Sophomore Year
Ka dib markii Junior Year
Marka inaan qaato xiisadaha lagama maarmaanka u ah DAT ah
Tani waa su'aal guud oo dadka intooda badan ku baryo diyaarinta Imtixaanka Admission Ilkaha. Waxaan wax ka qaban doonaa su'aashan iyo sidoo kale siin qaar ka mid ah macluumaad waxtar leh kaa caawin doona inaad qorsheyso baxay fasalada undergraduate iyo qaadan DAT ee waqti macquul ah.
Inta badan dadka ku talin lahaa in aad qaadato DAT midig dib markii ay kaalinta aad Biology Guud, Chemistry Guud, iyo Organic Chemistry loo baahan yahay koorsooyin si wax walba waa cusub in maankiinna. Taasi waxay noqon kartaa mid sanad Sophomore ka dib xilliga xagaaga ama sanadka Junior inta lagu jiro xagaaga ka dib. Baan ku qaadan lahaa marka aad diyaar u tahay oo aan u guuxi.
Inta badan ardayda ayaa jagooyinkoodii loo baahan yahay qaban doono dhammaadka sannadka Sophomore iyo waxa uu dhici karaa inta lagu jiro xagaaga ka hor inta aysan bilaaban sanad Junior of college; laakiin haddii aadan dareemayaa gabi ahaanba diyaar u ah inuu ku qaadan barta in ka dibna uguma dhigaynno, walwal lahayn. Waxaad aan la codsanin dugsiga ilkaha ilaa xagaaga ka hor inta sano Senior si aan loo baahnayn in ay ku degdegin, oo waxay qaadan DAT ee marka aadan si buuxda diyaar u ah. Waxaa jira faa'iidada iyo khasaaraha qaadashada DAT sanad Sophomore ka dib ama waxa aad sano ka dib Junior.
By qaadashada DAT ah inta lagu jiro xagaaga sanadka Sophomore ka Dib markaad aad DAT samayn doono iyo dhibcaha diyaar u ah in la soo gudbiyaa oo ay la socdaan codsigaaga marka aad codsaneyso xagaaga soo socda. Waxaad heli doontaa in aad Biology iyo koorsooyin Chemistry more cusub ee maskaxdaada sida aad dhammeeyey oo keliya iyaga dhamaystirka kuwaas oo kaa caawin doonaa in aad waxbarasho ka hawl DAT oo kaa caawin doona inaad si ay u qabtaan si fiican u ah oo ku saabsan. Waxaad eegi karnaa oo keliya DAT iyo welwelina diyaarinta codsigaaga ilaa xagaaga soo aadan. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa hal sano ah ka hor inta aadan soo gudbin codsigaaga si ay dib u DAT haddii loo baahdo, si kastaba ha ahaatee, xitaa ma fiirsan aanad dib DAT sida ikhtiyaarka ah. waxaa mar qaad marka aad diyaar iyo in la sameeyo waxa la yihiin.
By qaadashada DAT ah inta lagu jiro xagaaga sannadka Junior ka dib markii ay u badan tahay waxaad yeelan doontaa waxbarasho dheeraad ah iyo sidoo kale-fekrado iyo aqoonta markan, tan iyo aad waqti dheeraad ah si ay u qaataan koorsooyin dheeraad ah oo la doorto. Kuwani koorsooyin kale oo la doorto in aad qaadan karto ka hor, sida: anatomy, Physiology, iyo cilmi barasho xayawaan; waxay noqon kartaa faa'iido caawinaya inaad samaysaan fiican on DAT ah. Si kastaba ha ahaatee, dadka intooda badan ay buuxiyaan Biology General iyo koorsooyin Chemistry ka dib markii sanadkii Sophomore iyo koorsooyinka waa kuwan bulk of DAT ah.
By sugaya in ay qaataan DAT ilaa sannadka Junior ka dib wax ma noqon doonto sidii cusub ee maskaxdaada iyo doonaa malaha u baahan more waxbarashada iyo dhiig ku saabsan mawduucyo ka hor qaadashada DAT ah. Waxaad sidoo kale u baahan doontaa in aad hubiso in aad leedahay codsiga dhamaystiran iyo gudbisay wax yar ka dib codsida furmay. Waxaad heli doontaa uu ku dhaqmo codsigaaga waxbarashada DAT haddii aadan qaadan DAT ah by time codsida fureysaa inta lagu jiro xagaaga ka hor inta sano Senior. Waxaad gudbin kartaa codsigaaga aan qaaday DAT weli. Waxaa aad u fiican in aad codsiga samaysay iyo gudbisay wax yar ka dib codsida furo, oo waxay qaadan DAT ka dib soo gudbinta codsigaaga haddii loo baahdo. Waxaan ku talinaynaa lahaa qaadashada DAT ugu dambeyn July ee xagaaga in si kastaba ha ahaatee. Mar kasta oo aad go'aansato in aad qaadato DAT ah, waxaad u baahan doontaa caawimo sida ugu badan ee aad ka heli karto wax wanaagsan samaysaan waxa ku saabsan. Eeg ah koorsooyinka udiyaarin DAT Waxaan ku talinaynaa in xiddiga imtixaanka.
Dugsiyada badankoodu waxay dib u eegaan codsiyada sidii ay ku heli ku saleysan ee socda. Haddii codsigaaga ma dhamma, maxaa yeelay dhibcaha la soo gudbin, ama sabab kasta oo kale oo markaas codsigaaga ma dib loo eego ilaa iyo wax kasta oo la helay iyo waa dhameystiran yahay. Waxaad ka dhigi doonaa oo kaliya habka codsiga ka badan wareer iyo niyadjab by aan lahayn codsigaaga dhamaystiran iyo dhibcaha aad soo gudbin hab wakhti. Dugsiyada aan bilaabi doonaan in ay dib u eegaan codsiyada ilaa August caadi ahaan si ilaa iyo inta aad ka heli DAT sameeyey by July dhibcaha aad imaan doono ka hor inta codsigaaga dib loo eego oo waa inaanan ka aad wax dib u dhac ah ee geedi socodka dib u eegista.
Waxaa hoos u ahaantii yimaado si heer ah in waqtiga ugu fiican in ay qaataan DAT waa marka aad dareentid in aad tahay karti iyo diyaar u. Haddii aad dareento in loola cararay ama aan diyaar u yihiin sanad Sophomore ka dib ka dibna wax yar ka dheer sugto ilaa aad u qaadato. Iska waa hore u sameeyey by July aad ka dib markii sanadkii ugu dambeeyey ee Junior iyo aad u wanaagsan si ay u tagaan noqon doonaa.
Anigu ma aan qaadan DAT ilaa July my sanad yar ka dib, weli waxaan weli heli karo dhibcaha aan gelin dugsiyada in aan codsanaya in hab wakhti. Si kastaba ha ahaatee, Waxaan isku dayi lahayd in aad naftaada siin qolka neefsashada dheeraad ah haddii ay suurto gal oo iska qaado si degdeg ah ka badan aan ku sameeyey.
Waa in aad leedahay mustaqbalkiisa undergraduate oo dhan, waayo, afarta sano ee la qorsheeyey soo baxay oo fasalada aad qaadan doono sannad walba iyo xataa semester kasta. Tani waxay kaa caawin doontaa si loo hubiyo in aad qaadatay koorsooyinka lagama maarmaan hore oo ay diyaar u yihiin in ay qaataan DAT iyo codsan dugsiga ilkaha.
Ka hor inta aadan bilaabin waxbarashada undergraduate aad haddii ay suuragal tahay, fadhiistaan ​​iyo qorsheeyo waxa koorsooyin ku qaadan doonaa, waayo, semester kasta oo ka mid ah xirfadiisa undergraduate. Hubi in aad leedahay fasalada loo baahan yahay buuxiyo by time in aad jeclaan lahayd in ay qaataan DAT ka dibna qaadan wax xulasho dheeraad ah ama koorsooyinka lagama maarmaan u ah dugsiga ilkaha ka dib markii uu soo dhameystay DAT ah. Waxaad si fiican loo diyaarin doonaa DAT ah oo ay leeyihiin stress badan ka yar by waxan u samaynaysaan.
Haddii aadan dhameystirtay koorsooyinka loo baahan yahay ka hor ka dibna loo dhigo qaadashada DAT ilaa aad leedahay. Waxa ay noqon doontaa qalad in ay qaataan DAT oo aan la si habboon loo diyaarsho.
dugsiga ilkaha u dhiganta ku dhawaad 20 xisaabin semester a arday ah undergraduate. Sidaa darteed, hubi in ay qorsheeyaan qaar ka mid ah xilli aad la credits ka badan si ay u muujiyaan in aad awood u taabato load culus waxaan ka dhigi lahaa, laakiin hubi in weli si fiican u samayn fasallada aad. Ha isku dilaan semester kasta oo isku dayaya in ay qaadan xamuulka Dabcan culus; qorsheeyo baxay koorsooyinka aad si caqli ah si aad u load a dabcan isku dheeli tiran weli weli aad u hesho fasallada wanaagsan.
Koorsooyinka soo socda ayaa loo baahan yahay in la dhameystiro ka hor inta aysan DAT ah:
Koorsooyinka soo socda ayaa sidoo kale loo baahan yahay ama faa'iido DAT ama dugsiga ilkaha:
xisaabta (College Aljabra / tirignoomatari / Pre-Calculus / Calculus)
Art Course (dhoobada, farshaxan, rinjiyeynta, sawir, iwm)
Course Business (Maareynta Ganacsiga, Accounting, Maaliyadda, Suuq-, iwm)
Waxaan kula talin lahaa qaadashada koorsooyinka waxaad u baahan doontaa, waayo, DAT ee wakhtiyada soo socda ee waxbarashada undergraduate aad:
Biology Guud, Chemistry Guud, Doorashada kale
Chemistry organic, Doorashada kale Biology, xisaabta, Doorashada kale
physics, English, Doorashada kale
Waxa suurto gal ah Kiimikada noole, Doorashada kale
Waxaan rajeyneynaa in this idiin gargaari in aad diyaarinta DAT ah oo anna waxaan idin balan qaado in ay qorshaynayaan baxay koorsooyinka aad hore waxaad yeelan doontaa madax xanuun yar oo guulo badan oo waxbarashada iyo diyaarinta ee DAT iyo dugsiga ilkaha. Samee qorshe iyo Raaca!
Haddii aad qabto wax su'aalo ah ama faallo ka dibna si xor ah u hoos iyaga wadaagaan!